China uxinizelelo oluphezulu lokucoceka ukujongana nococeko olunzima lwe-YF-Zcs 58 57 56 mveliso kunye nabathengisi | YUNFENG
uxinizelelo oluphezulu lokucoceka kujongana nongcoliseko olunzima lwe-YF-Zcs 58 57 56
Ukuhambelana okuPhezulu kwePulp Cleaner / Desander Separator / iServer Remover / iSand-Catcher: Eyona njongo iphambili yokucoceka koxinano oluphezulu ukwahlulahlula izinto ezingcolisayo ezivela kwimicu ekumisweni kwemicu emanzini .Oko kukhusela izixhobo ezisezantsi kunxibo olugqithisileyo kunye nomonakalo. Zingasetyenziselwa ukubuyiswa kwefayibha. Ikhowuni ephindwe kabini yokucoceka kwe-pulp iphambili ...
Ukuhambelana okuphezulu kwePulp Cleaner / Isahluli sesahlulo / Ukususa iSanti / iSand-Catcher
Izicoci ze-HD zinobubanzi obukhulu obucocayo bokucoca phambili abakwaziyo ukuqhubekekisa kumakhulu aliqela eetoni zosinga ngosuku. Eyona njongo iphambili yokucoceka koxinano oluphezulu ukwahlulahlula izinto ezingcolisayo ezivela kwimicu ekumisweni kwemicu emanzini .Oko kukhusela izixhobo ezisezantsi kunxibo olugqithisileyo kunye nomonakalo. Zingasetyenziselwa ukubuyiswa kwefayibha.
I-cone ephindwe kabini yokucoca i-pulp izixhobo eziphambili zokucoca, ngakumbi ekuhlanjululeni inkunkuma yephepha elingcono, sesinye sezixhobo eziphambili zephepha lokuphinda lisetyenziswe. Isebenzisa imicu eyahlukeneyo kunye nenani lokungcola, ukuze umgaqo wokwahlulwa kwe-centrifugal kokungcola okunzima okuvela kwimpuphu ukucoca iinjongo zempuphu. Isixhobo sisebenzisa ububanzi, zombini ukungqinisisa okuphezulu kwintlama yokuhlanjululwa. Phambi kokuba umatshini usetyenziselwe ukungqinelana okuphantsi kwe-pulp cull yokuhlanjululwa.
Isicoci silula, unyawo oluncinci, amandla amakhulu, oomatshini abazenzekelayo banokulungisa ukusebenza ngokulula. Ukuxinana iplagi yokuphuma, icocekile kwaye isebenza kakuhle, ixesha elinye kuphela ngokusebenzisa isicoci esicocekileyo, izixhobo zokuphatha i-slurry azisafuneki ngomsila, ilahleko encinci Ukunxiba kone kunye nobomi obude: akukho drive, akusekho kulondolozo, zimbini iintlobo ezizenzekelayo nezesikhokelo.
Ukuhamba m3/ Min
Ukuqhubekeka kwamandla t / d
Ukungqinelana okuphezulu kokucoceka kusetyenziswa ikakhulu ekususeni ukungcola okuncinci kunye nobunzima okunje ngentsimbi, isikhonkwane sencwadi, uthuthu, isanti, i-cullet njalo njalo. Injongo yezixhobo zokukhanyisa ukubamba, ukucoca i-pulp kunye nokuphuculwa komgangatho kuya kufezekiswa.
1. Ukondla umbhobho nge-angle ethile yokuthambekela kuya kwenza amandla aqinileyo okuhamba kwe-vortex ukwahlula ukungcola okunzima ngokufanelekileyo.
2.Cone umzimba yamkelwe alumina banxibe yodongwe enganyangekiyo eqinisekisa ixesha elide luncedo.
3. Ubume bee-cone ezimbini banciphisa ukulahleka kwefayibha ngelixa kuphakanyiswa ukungalingani kokungcola.
4.Kulawulwa yinkqubo ezenzekelayo ye-PLC, kuqoqosho kubasebenzi nakwizixhobo.
Egqithileyo 133 Izixhobo zokutsala izixhobo ezicocekileyo zoxinaniso, isikrini soxinzelelo
Okulandelayo: Ukuguqula izinto zokucoca zahlulahlula ukukhanya (i-wax, iplastiki, kunye nezinye izinto ezinamathelayo.) Ezingcolisayo ezivela kwimicu
Umcoci we-Hd ococekileyo
Ukuhambelana okuphezulu kwePulp Cleaner